Sida loogu laabto macruufka 12 adoo ka saaraya macruufka 13 Beta | Wararka IPhone
Sida loogu laabto macruufka 12 adoo ka saaraya macruufka 13 Beta
Luis Padilla | | macruufka 12, Casharrada iyo buugaagta
IOS 13 iyo iPadOS waxay ku keenayaan dareen warkooda dadka isticmaala badanna waxay ku dhiiri galinayaan inay ku rakibaan aaladooda hada Beta Dadweynaha waa la heli karaa. Laakiin xaqiiqadu waa taas maalinba maalinta ka dambeysa laguma talin inaad ku isticmaasho Beta qalabkaaga mobilada, iPhone ama iPad Sababtoo ah, sida dhammaan Beta, guuldarrooyinka nidaamka laftiisa iyo barnaamijyada aad rakibto ayaa ah kuwo soo noqnoqda.
Miyaad dib ugu laaban kartaa macruufka 12 ka dib markii qalabka iOS 13 Beta la rakibo? Ma jiraan wax dhibaato ah, waa geedi socod nabdoon oo fudud, laakiin Waxaa jira tixgelinno qaarkood oo ay tahay inaad ogaato kahor intaadan tallaabadaas qaadin. Waxaan kuu sharaxeynaa waxa ay tahay inaad maskaxda ku hayso iyo sidoo kale talaabooyinka la raacayo si aad ugu noqoto macruufka 12 ee iOS 13 Beta.
1 Qodobbo muhiim ah oo maskaxda lagu hayo intaadan soo noqon
1.1 Kaabta iPhone ama iPad
1.2 watchOS 6 kuma shaqeynayo iOS 12
2 Sida hoos loogu dhigo macruufka 13 ilaa iOS 12
2.1 Habka soo kabashada
2.2 Soo celi qalabka
Qodobbo muhiim ah oo maskaxda lagu hayo intaadan soo noqon
Sidaan dhahno, ku noqoshada macruufka 12 waa macquul waana fududahay, laakiin waxaa jira tixgelinno horudhac ah oo ay tahay inaad ogaato oo mararka qaarkood, waxay kaa dhigi kartaa inaad dib uga fakarto ku noqoshada iOS 12. Mid waa keydinta qalabkaaga, tan kalena waa inuu ku sameeyaa Apple Watch-kaaga.
Kaabta iPhone ama iPad
Keydadka aad sameysay intii lagu jiray Beta ma shaqeyn doono mar aad ku noqoto macruufka 12, sidaa darteed Haddii aadan sameynin wax kayd ah kahor intaadan cusboonaysiin iOS 13 Beta, markaad dib ugu noqotid macruufka 12 waxaad lahaan doontaa taleefan dib loo soo celiyey, nadiif ah, sanduuqa ka baxsan.
Haddii aad ka mid tahay kuwa adeegsada iCloud si aad u badbaadiso sawirradaada, xiriirada, qoraalada, faylasha, iwm. Tani waxay kaliya ka dhigan tahay inaad u baahan tahay inaad wax walba gacanta ku xirto oo aad dib u rakibto codsiyada, laakiin ma waayi doontid xogta. Haddii aadan isticmaalin iCloud ka dib aad u taxaddar maxaa yeelay waxaad waayi doontaa wax kasta oo ku jira mobilkaaga inaad adeegsato nidaam kale oo kayd ah mooyee. Hubso in xogtaada si fiican loo keydshay kahor intaadan howsha sii wadin.
watchOS 6 kuma shaqeynayo iOS 12
Dhibaatada kale sidaan soo sheegnay waxay la xiriirtaa Apple Watch. Haddii aad u cusbooneysiisay watchOS 6, halkan dib ugama laabaneyso. Tani waa sababta aysan Apple ugu darin Apple Watch barnaamijkeeda "Betas" ee dadweynaha. Haddii aad adeegsatay astaan ​​"qarsoodi ah" si aad saacaddaada ugu soo geliso nooca cusub ee Beta, waxaa lagugu xukumay inaad sii waddo isticmaalkiisa illaa kan rasmiga ah laga sii daayo.
Tanina waxay ka dhigan tahay in taleefankaaga iPhone-ka uu ku xirnaan doono iOS 13 maxaa yeelay haddii kale Apple Watch-kaaga ma la shaqeyn doono iPhone-kaaga. Caadi ahaan, xitaa ma xiri kartid iyaga, laakiin haddii aad awooddo, si habboon uma shaqeyn doono adiga.. Ilaa aad rabto inaad ku haysato Apple Watch-gaaga khaanad illaa nooca rasmiga ah laga sii daayo, taladaydu waxay tahay inaad ku dhajiso iOS 13-ka iPhone-kaaga.
Sida hoos loogu dhigo macruufka 13 ilaa iOS 12
Waa nidaam fudud oo fudud haddii aad raacdo talaabooyinka aan hoos ku sharaxayno. Marka hore waa inaad hubisaa inaad haysato Fiilo hillaac shahaado leh (haddii ay tahay tan asliga ah ee Apple ka wanaagsan) iyo inaad iTunes ku rakibtay oo aad cusbooneysiisay nooca ugu dambeeyay ee la heli karo. Haddii aad buuxiso shuruudahan, waad bilaabi kartaa hawsha.
Habka soo kabashada
Waa inaad ku xiraa iPhone-gaaga ama iPad-ka kombiyuutarka adoo adeegsanaya USB-ka xarigga hillaaca, iyo iTunes-ka oo furan ku rid habka soo kabashada. Si aad u gaarto qaabkan waa inaad raacdaa tilmaamaha soo socda:
Haddii IPad-kaaga uu leeyahay Aqoonsiga Face: riix oo si deg deg ah u sii daa batoonka kor u kaca, ka dib ku samee isla isla badhanka mugga hoos, ka dibna riix oo hay batoonka on / off ilaa uu iPad ka soo galo habka soo kabashada.
Wixii iPhone 8 ah iyo wixii ka dambeeya: Riix oo si deg deg ah u sii daa badhanka mugga kor u kaca, ka dibna si la mid ah ku samee badhanka mugga hoos, ka dibna riix oo hayso batoonka on / off ilaa inta uu iPhone galayo soo kabashada.
Wixii iPhone 7, 7 Plus, iyo iPod Touch 7: Ku dhaji labada badhammada On / Off iyo Volume Down isla mar, isla markaana ku sii riix iyaga ilaa shaashadda qaabka soo kabashada ay ka muuqato.
Wixii iPhone 6s ama kahore, iPad leh badhanka guriga, ama iPod Touch 6 iyo wixii kahoreya: Riix oo hayso badhanka On / Off iyo Home isla mar ahaantaana, kusii wad riix iyaga ilaa shaashadda soo kabashada ay muuqato.
Soo celi qalabka
Markaad haysatid iPhone-gaaga ama iPad-kaaga qaabka soo-kabashada, waxaad kaliya haysataa riix badhanka soo celinta iTunes. Hubso inaad gujiso Soo Celinta oo aanad Hubin Cusboonaysiinta ama Cusboonaysiinta. Marka taas la dhammeeyo, waa inaad sugto inta hawshu socoto, intaas kadib iPhone-kaaga ayaa kuu oggolaanaya inaad dib u soo celiso kaydinta, haddii aad qaban lahayd.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 12 » Sida loogu laabto macruufka 12 adoo ka saaraya macruufka 13 Beta
Hal shaki, waxaan ku sameeyay keyd kumbuyuutar ka hor intaanan gelin ios13, laakiin maadaama loo dhigay otomaatig, waxay horey u sameysay keydad ios13. Su'aashaydu waxay tahay hadaan dib udhaco miyaa la heli karaa koobiga ugu dambeeya ee aan ku sameeyay ios12? Mahadsanid
Xaqiiqdii wuu tirtiri lahaa iyaga
Wax soo saarka IPhone ayaa kordhay rubucii lasoo dhaafay